Kutholwe ikhanda lowesifazane esigangeni | Isolezwe
Kutholwe ikhanda lowesifazane esigangeni
Izindaba / 12 October 2017, 09:01am / NONTUTHUKO NGUBANE
ISIGAMEKO sesibili lesi KwaZulu-Natal kutholwa ikhanda. Ngo-Agasti kwabanjwa owesilisa edayisa ngekhanda lomuntu edolobheni eThekwini. Isithombe THEMBA NTSHINGILA
USHAQEKILE umphakathi wakwaNjobokazi, eHammarsdale ngemuva kokutholwa kwekhanda lowesifazane ongaziwa esigangeni, ngoLwesithathu emini.
Kuthiwa leli khanda litholwe ngabo-12 emini ilungu lomphakathi ebelizihambela kanti isidumbu salo kushone elayizolo singakatholakali.
Isolezwe lithole ukuthi amaphoyisa ophiko lwezinja, iK9 afike endaweni okutholwe kuyo ikhanda ezobheka isidumbu kodwa kuze kwashaya intambama singakatholakali.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCaptain Nqobile Gwala ukuqinisekisile ukuthi kutholwe ikhanda lowesifazane elingaziwa kule ndawo kodwa uphenyo lwamaphoyisa lusaqhubeka. “Ngo-12 namhlanje (izolo) kutholwe ikhanda lowesifazane iminyaka yakhe elinganiselwa kwengu-30. Leli khanda alaziwa okwamanje ukuthi ngelikabani kodwa kunophenyo oluqhubekayo. Amaphoyisa asebenza ngezinja aphuthume kule ndawo ukuyobheka isidumbu kodwa besingakatholakali,” kusho uGwala.
Isolezwe lithole ngozifikele mathupha endaweni okutholwe kulo ikhanda ukuthi umphakathi uthukile ngokutholwa kwalo ngoba akwaziwa ukuthi ngelikabani.
“Ikhanda litholwe ngasesitolo sakwaShabalala manje asazi noma elomuntu wakule ndawo noma umuntu unqunywe kwenye indawo kwase kuzobekwa ikhanda lakhe endaweni yethu yini. Sithukile ngoba kungenzeka ukuthi kunomuntu oshumpula amakhanda endaweni. Sisengozini. Sifuna amaphoyisa aphenyisise ngalesi sigameko,” kusho umthombo.
Uthe akakwazanga ukubona kahle okuningi ngoba amaphoyisa abengasavumi ukuthi basondele lapho litholwe khona.
Khonamanjalo, uCaptain Gwala uveze ukuthi eNtshongweni, izolo kutholwe isidumbu somuntu ngabo-2 ntambama sifakwe epayipini.
Ngezithuba zantambama izolo, uCaptain Gwala uthe isidumbu besingakakhishwa epayiphini ukuze kubonakale ukuthi ngesomuntu wesilisa noma wesifazane yini.
Uthe bekungakacaci noma lezi zigameko zihlobene yini ngoba kushaye isikhathi sokushicilela amaphoyisa esematasa kuzo zombili izindawo zezigameko.
Amaphoyisa anxuse abangaba nolwazi olungasiza ekutheni kutholwe umndeni wowesifazane okutholwe ikhanda lakhe noma abathintekayo kulesi sigameko ukuthi baxhumane nanoma yisiphi isiteshi samaphoyisa esiseduze.